De Jong: “Barcelona waxay ku guuleysan kartaa Champions League xilli ciyaareedkan” – Gool FM
(Barcelona) 04 Feb 2020. Ciyaaryahanka caalamiga ah ee qaranka Holland Frenkie de Jong ayaa aaminsan in kooxdiisa Barcelona ay ku guuleysan doon karto tartanka Champions Leagea xilli ciyaaredkan.
Frenkie de Jong ayaa Camp Nou ku soo biiray xilli ciyaaredkii hore, waxaana si weyn loo amaanay waqtigiisii Amsterdam.
Hadaba, Wargeyska caanka ah ee “Mundo Deportivo” ayaa wareysi dheer la yeeshay De Jong kaas oo lagu weydiiyay su’aalo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen.
– Sanad ayaa laga joogaa markii Barcelona aad kaga soo biirtay Amsterdam. Sidee ahaayeen bilahaagii ugu horeeyay ee kooxda?
“Si fiican ayaan ugu raaxeystay, in aan u ciyaaro Barcelona waxay aheen Riyo ii rumowday, hadana waan ku suganahay, waana ku raaxeystaa”.
-La qabsigaagu ma ka sahlanaa sidii aad filaysay, ama wa uu ka sii adkaaday sidii aad u maleysay
“Bisheydii ugu horeysay ee Barca, waxaan ciyaaray daqiiqado badan, had iyo jeer waxa uu mid fiican sanadkeygii ugu horeeyay”.
“Hadana, Waan ku qanacsanahay wax qabadkeyga, laakiin ma aha ilaa xad, waxaan ku qanacsanahay inaan wali sameeyo in ka sii badan”.
-Maxaa ka maqan si aad u noqoto De Jong-Gihii Ajax?
“Waxaan u maleynayaa inaan ciyaaray ciyaaro qaar fiican, laakiin waxaan sidoo kale u maleynayaa inaan waxbadan sameyn karo, laakiin markii aad hesho koox cusub waxaad marwalba u baahan tahay waqti la qabsi waxaana u maleynayaa inay caadi tahay inay qaadato waqti qaar, laakiin waxaan rajeynayaa u ciyaarkasta si ka sii wanaagsan sidii hore xilli ciyaareedkuna uu socdo”.
-Maxay tahay farqiga u dhaxeeya Valverde iyo Quique Setién?
“Way cadahay in uu jiro kala duwanaasho, wayna jiraan wax ay ku kala duwan yihiin sida in la koontaroolo iyo kubad heysiga, laakiin faahfaahinta iyo nidaamku waxyar bay ka kala duwan yihiin, laakiin ma aha inay iyagu doonayaan inay ciyaaraan kubad aad u kala duwan”.
-Setién wuxuu u muuqadaa mid ahmiyada siinaya kubad heysiga, in la koontaroolo kubadda, iyo baasas badan, …Taasi dooqaaga ciyaar ma tahay?
“Ma aqaan, waxaan arki doonnaa toddobaadyada soo socda”.
Hogaanka hadda waxaa idinka heysa Real Madrid, sidee idin saameysay guul daradii Valencia, Mana bar-tilmaamedsaneysan in 3 koob aad qaadan ?
“Dabcan, waan u dagaalmai doona dhaman saddexda koob, waana wax caadi u ah koox Barcelona oo kale”.
-Sidaan miyaad ku qaadi kartaan Champions Leagea?
“Haa, waan aaminsanhay in aan sameyn karo,Waana awoodna”.